Ukwenza umkhankaso wokurisayikilisha, ungawuhlela njani ukuze ube yimpumelelo? | Ukuhlaziywa okuluhlaza
IsiJamani sasePortillo | | Ikhaya eliGreen, Yendalo
Sonke sinokuhlela a umkhankaso wokurisayikilisha esixekweni sethu, kuba kuqhelekile ukuba akukho nkqubo zokwahlula, ukuqokelela kunye nokurisayikilisha yonke inkunkuma eveliswayo.
Yiyo loo nto isikolo, i-NGO, iklabhu, iinkampani kunye namanye amaziko enokuququzelela amaphulo okurisayikilisha akhuthaza Ukurisayikilisha kwazo zonke iintlobo zenkunkuma. Ukuba ufuna ukuhlela enye, nazi izikhokelo oza kuzilandela.
1 Iingcebiso ngephulo lokurisayikilisha ngempumelelo
1.1 Singaliqhuba njani iphulo lokurisayikilisha esikolweni?
2 Ungabakhuthaza njani abantu ukuba baphinde basebenzise kwakhona?
2.1 Ngawaphi amacandelo akhuthaza amaphulo entlalontle afana nokurisayikilisha?
3 Njani ukuba iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona?
4 Yintoni esinokuyenza ukuphucula inkunkuma esetyenziswayo kwakhona?
5 Uyenza njani iphulo lokuqokelela inkunkuma?
Iingcebiso ngephulo lokurisayikilisha ngempumelelo
Ukuze iphulo lokurisayikilisha libe yimpumeleloizikhokelo ezithile kufuneka zithathelwe ingqalelo njenge:
Ukwenza umkhankaso wokuphinda usebenzise kwakhona kunesiqalo sokuqala kunye nexesha lokuphela, ukuba aliguqulwanga kwiinkqubo. Kukho umhla wokuqalisa kunye nomhla wokuphela.
Entle unxibelelwano Kwindawo ekucwangciselwa kuyo iphulo, sebenzisa zonke iintlobo zemidiya ezinje ngeepowusta, intengiso, uthungelwano lwasentlalweni, umnyango nomnyango, phakathi kwezinye izinto.
Nika ulwazi olucacileyo xa usasaza iphulo ukuze wonke umntu awuqonde umyalezo kunye nendlela oza kwenziwa ngayo.
Phambi kokuqala iphulo, kuya kufuneka uphathe into eza kwenziwa ngenkunkuma okanye izinto eziqokelelweyo.
Ukubandakanya onke amacandelo ezentlalo nawoluntu ukuze liphumelele ngokwenene.
Nika iindlela kunye neendlela zokuthatha inxaxheba kubemi ukuze abantu abaninzi bakwazi ukusebenzisana.
Xa liphelisiwe eli phulo, iziphumo kufuneka zixelwe kumajelo eendaba ahlukeneyo ukuze abo bathathe inxaxheba bazi ukuba yaphela njani kwaye iphumelele ntoni.
Iphulo lokurisayikilisha linokuphindwa kodwa kulungele ukuyila kwaye unxibelelane ngendlela eyahlukileyo.
Iphulo lokurisayikilisha linokuba yengingqi, ingingqi kunye nelizwe. Banokugxila kwinani elikhulu leemveliso okanye izinto eziyinkunkuma kodwa akufuneki zilahlwe njengoko beziza kuvelisa ngco liseko ngaphezu kokuchitha izixhobo.
Ukurisayikilisha kufuneka ibe yeyona ndlela iphambili yokulawula inkunkumaKwidolophu nganye, kwiidolophu nakwilizwe lonke ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kufuneka kukhuthazwe. Ngale ndlela uya kuba ukhusela i ngileyo.
Iphulo elifanelekileyo lokurisayikilisha kufuneka iphakamise ulwazi kwaye yazise malunga nesidingo sokurisayikilisha kwaye unike ulwazi ngendlela yokwenza.
Ngaba ukhe walungiselela iphulo lokurisayikilisha? Ngawaphi amanyathelo owathathileyo ukuwucwangcisa?
Ukugqibezela, ungalibali ukuchaza intsingiselo yemibala kwimigqomo yokurisayikilisha:
Singaliqhuba njani iphulo lokurisayikilisha esikolweni?
Ukukhuthaza ukuphinda kusetyenziselwe ukuphinda kusetyenziswe ukuqala emncinci kuhlala kuyinto elungileyo ukuze bakwazi ukwazisa le mikhwa kubomi babo bemihla ngemihla. Ukuba sifundisa abantwana ukuba baphinde basebenzise kwakhona besebancinci, sibenza ukuba baqhubeke nokuzenza ngokuzenzekelayo kwixa elizayo. Masibone ukuba zeziphi izitshixo ukuze iphulo lokurisayikilisha esikolweni lisebenze kakuhle:
Fundisa ii-3R kunye nokubaluleka kwazo
Qala ngenkqubo yokurisayikilisha iklasi
Fundisa kwaye uchonge izikhongozeli zokugcina zonke izinto ezisetyenzisiweyo kubugcisa
Phinda usebenzise zonke izinto ezinokusetyenziswa kwenye indawo
Yenza imisebenzi ukuze abantwana bakwazi ukusebenzisa izinto ezirisayikilishwe
Chaza ukubaluleka kokuhlamba izandla emva kokuphinda zisetyenziswe
Lungiselela ukhenketho olukhokelwayo lwezityalo zasekhaya zokurisayikilisha
Ungabakhuthaza njani abantu ukuba baphinde basebenzise kwakhona?
Ukukhuthaza abantu ukuba baphinde basebenzise kwakhona, kuya kufuneka ukhuthaze uhlobo oluthile lwebhaso. Unokukhetha ukwenza umkhankaso womnikelo wokukhuthaza inkcubeko yokungasebenzisi iphepha okanye ukupakisha ukuba akukho mfuneko. Ukwenzela ukwahlula ngokufanelekileyo inkunkuma, kubalulekile ukuba ube nemigqomo eyaneleyo yokurisayikilisha ukulungiselela oku.
Unganika izinto zokudlala, iimpahla kunye neencwadi ezingakunikezeliyo ukuze omnye umntu aphinde azisebenzise. Eyona nto ilungileyo kukunxibelelana nazo zonke ezi zenzo kwaye ukhuthaze ukufikelela kuhlobo oluthile lwenjongo yokunciphisa ifuthe kwindalo esingqongileyo yemisebenzi mihla le.
Ngawaphi amacandelo akhuthaza amaphulo entlalontle afana nokurisayikilisha?
Ukwenza ukuba abantu abaninzi basebenzise kwakhona Kuhlala kunomdla ukunxibelelana nemibutho engekho phantsi kukarhulumente, amaziko emfundo, okanye namaziko ezemidlalo Ngawaphi amacandelo anokukunika olona ncedo, mhlawumbi ngokubonelela ngegumbi lokubonelela ngeenkomfa kwaye ngaloo ndlela uphakamise ulwazi phakathi kwabantu, okanye ngokuxhoma iipowusta, umzekelo.
Njani ukuba iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona?
Ukuphinda kusetyenziswe ngokuchanekileyo kubalulekile ukwazi kakuhle inkunkuma, uhlobo lwayo kunye nendawo ekufuneka ifakwe kuyo. Inkunkuma eveliswa kakhulu kumakhaya ethu yonke imihla kukupakisha, iiplastikhi, iphepha, ikhadibhodi kunye neglasi. Zonke kufuneka zahlulwe kunkunkuma yendalo kwaye zibekwe kwizikhongozeli zazo.
Emva koko, kufuneka sazi ukuba yintoni inkunkuma enobungozi okanye inetyhefu kwaye siyibeka phi. Kule nto, kukho izikhongozeli ezithile, ezo zeebhetri, ioyile esetyenzisiweyo kunye neendawo ezicocekileyo ezixekweni.
Yintoni esinokuyenza ukuphucula inkunkuma esetyenziswayo kwakhona?
Ukuphucula ukuphinda kusetyenziswe inkunkuma, into ebalulekileyo kukuba uqeqeshe kakuhle kwaye wazi ngokwahlukileyo iintlobo zezikhongozeli ezikhoyo. Nathi sinako ukwenjenjalo cela amabhunga engingqi ukuba aphucule inkqubo yenkunkuma, ukuququzelela ukubekwa kunye nokuqokelelwa okufanayo. Eyona nto ibaluleke kunayo yonke kukunciphisa ukusetyenziswa ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye nokusetyenziswa kwemathiriyeli ekrwada.
Uyenza njani iphulo lokuqokelela inkunkuma?
Amanyathelo ekufuneka elandelwe aya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi ngokufanayo nokuba sifuna ukwenza into yokurisayikilisha; Oko kukuthi, kufuneka sibeke izikhongozeli ezifanelekileyo kwaye sichaze ukuba inkunkuma nganye iya phi. Yintoni egqithisile, kubalulekile ukwazisaNokuba yeyokubonisa iividiyo kunye / okanye imifanekiso yongcoliseko olukhoyo kwiplanethi, kunye neziphumo zayo kwindalo nakwithi.
Kuyathakazelisa ngakumbi ukuqala kwiinkulisa okanye ezikolweniKuyaziwa ukuba xa abantwana befunda besebancinci ukukhathalela okusingqongileyo, kunokwenzeka ngakumbi ukuba baqhubeke bekwenza oko njengabantu abadala.
Kancinci kancinci, elowo ubeka ingqolowa yakhe yentlabathi, siza kuba noMhlaba ococekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Ukonga umbane » Ikhaya eliGreen » Iphulo lokurisayikilisha
Enkosi Adriana, iindaba zimnandi kakhulu, kukuba ndikhangela esi sihloko kugoogle kuba ndifuna abantu baseCosta Rican (ilizwe lam) bazi ukuba bayayenza loo nto, kwaye ukuba ukhetha, khangela "rio virilla costa rica ", Kwaye baya kuphuma neendaba ezingathandekiyo malunga nenkunkuma ethi ngelishwa iphoswe emilanjeni.
Ndiyithanda kakhulu into eyithethayo kuba ukuze sikwazi ukuphinda sisebenzise kwakhona
UGabriel Castillo sitsho
Kakhulu! Isebenze njengesiseko sokucwangcisa iphulo kwinkampani endiyisebenzelayo.
Phendula uGabriel Castillo
Uyinyusa njani imithombo yendalo esingqongileyo?
UAndrea yulieth lopez wemfazwe eyimfihlo sitsho
Olu lwazi lundincede kakhulu enkosi adrian
Phendula Andrea yulieth lopez imfazwe eyimfihlo
Molo, ndingathanda ukufumana inkxaso kunye nolwazi lokuphinda usebenzise inkunkuma emsebenzini wam. Sisebenzisa iiplastikhi ezininzi kwaye ndingathanda ukunceda iplanethi encinci.
Molweni ngemini elungileyo; Ebumelwaneni bethu, siququzelela ukwahlukana kwenkunkuma ngamanqaku aluhlaza.
Yenziwe sithi, ziya kubekwa endaweni enye, (ibhetri yeebhegi ezili-15) siyavumelana nenkampani eya kuthi isuse inkunkuma, siya kubeka ikhamera yokulawula kwaye siyilungise leyo ingafanelekanga.
Ingcebiso, loluphi uhlobo lolwazi ekufuneka silinike ummelwane, ukuze azi apho angabeka khona inkunkuma, njl.
Ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho.
Iiplastiki ezinokuboliswa ziintsholongwane